Allgedo.com » Dowladda Kenya oo ka hortag ka sameysay qorshe cusub oo Al-shabaab doonayaan.
Dowladda Kenya oo ka hortag ka sameysay qorshe cusub oo Al-shabaab doonayaan.
Print here| By: allgedo.com: Wednesday, July 6, 2011 // 2 Jawaabood
Dowladda Kenya ayaa la sheegayaa inay heegan buuxa gelisay ciidamadeeda ku sugan xuduudaha Soomaaliya iyo Kenya gaar ahaan dhinaca gobolka Jubbada Hoose kadib markii ay ka war heshay qorshe ay Al-shabaab doonayso.
Sida wararku sheegayaan dowladda Kenya ayaa ogaatay in saraakiil Al-shabaab ka tirsan oo dhaawaac uu ka soo gaaray duqeymihii dhawaan diyaaradaha Mareykanku ka geysteen magaalada Kismaayo dhaawacooda la soo geliyo gudaha dalka Kenya si halkaas loogu dabiibo.
Saraakiisha ka tirsan Al-shabaab ee la hadal hayo indhaawacooda la geeyo Isbitaallada dalka Kenya ayaa waxaa ka mid ah baa la leeyahay Bilaal El-Berjawi oo ka mid ah saraakiisha Al-shabaab oo dhalashadiisu tahay Ingiriis kaasoo la sheegay in dhaawiciisa wax looga qaban waayay gudaha dalka Soomaaliya.
Sida ay qorayaan Warbaahinta dalka Kenya, ciidamada amaanka ee dalkaasi ayaa heegan buuxa la geliyay si ay uga horgagaan in dhaawaca xubnaha ka tirsan saraakiisha Al-shabaab la geeyo gudaha dalka Kenya.
Wargayska Daily-Nation ee ka soo baxa dalka Kenya ayaa isagoo soo xiganaya mid ka mid ah Saraakiisha ciidanka amaanka ee dowladda Kenya ayaa waxa uu sheegay in dhaawaca Bilaal El-Berjawi oo la sheegay in wax looga qaban waayay gudaha dalka Soomaaliya gaar ahaan magaalada Kismaayo la doonayo in geeyo Kenya si halkaas looga helo goobo lagu dabiibo.
Bilaal ayaa waxaa la sheegayaa in uu ahaa ku-xigeenka Fazul Cabdullaahi oo ahaa madaxii Ururka Al-qaacidda ee geeska Afrika kaas oo dhawaan ay ciidamada dowladda KMG Soomaaliya ku dileen Ex.Koontarool Afgooye ee magaalada Muqdisho.
2 Jawaabood " Dowladda Kenya oo ka hortag ka sameysay qorshe cusub oo Al-shabaab doonayaan. "
Hodan muxumad says:
Waan ka xumaha in ciidamada gaalada e kenya raadsato almujaahid bilaal hadu nolol alle uqoray wu raysan insha’allah hadii kalena shahaadadu qaata raximt alah
Qadra torobo says:
Waan kugu raacsanaha hodan muxmaday gaalo way isbahaysata wayna israacda waxa kala dhacsan waa anaga islaam allaha ku irzaaqo shahaado io caafimad ayan ubaryayna bilaal wanku jecelnaha